Dawlada UK oo dhalinyarada Wadankeeda ka caawinaysa inay Guryo iibsadaan. | Shacabka Puntland	Monday, February 20th, 2017	Home
Dawlada UK oo dhalinyarada Wadankeeda ka caawinaysa inay Guryo iibsadaan.
Jan 5, 2017 - Post View: 2,706
Kumanaan Guryo ah oo loogu talagalay dhalinyarada guryaha ugu horeeya iibsanayso ayaa la dhisayaa, sida ay sheeg dowladda Britain.
Soddon meelood oo ku yaala gobolka England ayaa heli doona lacag dhan £1.2 bilyan, oo loogu talagalay mashruuca “Starter Homes Land Fund” oo lagu dhisayo guryo cusub.
Dhalinyarada guryaha iibsanaya waa inay da’dooda u dhaxaysaa 23 ilaa 40 waxayna helayaan guryo ugu yaraan ka raqiisan 20% inta ay suuqa ka joogaan.
Laaakiin, mid ka mid ah dadka ku xeel dheer guryaha ayaa BBC u sheegay in waqtiga guryaha lagu dhisayo ay tahay wax adag in lagu guulaysto.
Mashruuca Starter Homes Land Fund, ayaa markii ugu horaysay ay dowladda ku dhawaaqday sanadkii 2014, waxaana loogu talagalay inay dad badan guryaha ku iibsadaan.
Guryaha la raqiisinayo ayaa ah kuwo qiimahoodu yahay ilaa £250,000 guryaha London banaankeeda ku yaala, iyo kuwa London ku yaala ee qiimahoodu yahay £450,000.
Wasiirka guryaha Gavin Barwell ayaa sheegay: ” Dowladiisa inay ka go’an tahay inay dhisto guryo lagu caawinayo dhalinyarada inay gurigooda ugu horeeya iibsadaan.
Soddon xafiisyada deegaanada ayaa la doortay iyadoo la eegay sida ugu dhaqsaha badan oo ay u dhisi karaan guryaha. Deegaanadan waxaa ka mid ah Blackpool Council, Bristol City Council, Sheffield City Council iyo Luton Borough Council. Guryaha ayaa la filayaa in la iibgeeyo 2018.
Laakiin isagoo la hadlaya BBC, Christine Whitehead, oo ah Professor dhaqaalaha guryaha (housing economics) ee jaamacada London School of Economics, ayaa sheegay “in waqtiga guryaha lagu dhisayo uu aad u gaaban ayahay, ma fududa in guryo si dhaqso ah loo dhiso, sidoo kale waxaa nagu yar xirfada” ayuu yiri.
Dowladda ayaa sidoo kale balanqaaday inay dhisayso 200,000 oo guryo markii la gaaro sanadka 2020.
Tani waa hadalkii labaad ee ay dowladda soo saarto toddobaadkan si ay wax uga qabato guryo la’aanta ka jirto UK. Waxay Isniintii sheegtay inay ka dhisayso 48,000 oo guryo 14 meelood oo ku yaala gobolka England, oo u dhaxaysa Cornwall ilaa Cumbria.
Waxay sheegtay inay dhisayso saddex degmo oo cusub oo laga dhisayo Aylesbury, Taunton iyo Harlow & Gilston, oo lagu kordhinayo degmooyin oo la dhisayo.
Dowladda ayaa balanqaaday inay dhisayso 200,000 oo guryo markii la gaaro sanadka 2020.
Bishan ayay soo saari doontaa qorshaha dowladda ee ay ku dhisayso guryaha cusub.